Pick နှင့် Place စက်၊ Led Pick နှင့် Place စက်၊ SMT စက် - အီတန်
Led Pick ပြီးတော့စက်စက်
Smt Pick နှင့်စက်စက်
PCB Chip mounting စက်
Super Highspeed Pick နှင့်စက်စက်
အလယ်အလတ်မြန်နှုန်း Pick နှင့်နေရာစက်
ဘက်စုံသုံး Pick နှင့်နေရာစက်
LED Display လုပ်စက်
LED Tube အလင်းထုတ်လုပ်မှုစက်
Downlight ထုတ်လုပ်သည့်စက် LED
LEDlightlight ထုတ်လုပ်သည့်စက် LED
5M 50M 100M 500M ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလင်းချစက်ကိုစက်
1.2M Semi အလိုအလျောက်ဖယောင်းစက္ကူပရင်တာ
0.6M Semi Automatic Stencil ပရင်တာ
0.3M Semi အလိုအလျောက်ဖယောင်းစက္ကူပရင်တာ
SMT Reflow မီးဖို
12 ဇုန် Reflow မီးဖို
10 ဇုန် Reflow မီးဖို
8 ဇုန် Reflow မီးဖို
6 ဇုန် Reflow မီးဖို
5 ဇုန် Soldering မီးဖိုစက်
အကြီးစား Wave Soldering Machine
အလယ်အလတ် Wave Soldering Machine
တစ်ခုတည်းရထားလမ်း PCB ပေါ်ကို
နှစ်ဆရထားလမ်း PCB ပေါ်ကို
SMT Solder Paster ရောနှောပါ
PCB Loader ကို
အခြား SMT စက်များ
1200 * 300mm Semi-Auto မြင့်မားသောတိကျသောဖယောင်းစက္ကူ ...
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု Big Smt Machine, Doulble Side, A ...
Led Pick နှင့် Place စက်များ၊ ခေါင်းစီး ၈ လုံးမီးသီး ...
2018 နယူးသုံးစွဲမှုတန်ဘိုးများပြန်လည်စစ်ထုတ်ခြင်းမီးဖို ...
အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက် SMD နှင့် SMT ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရွေး ...
တည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် A ...
အလိုအလျောက်ဇုန် (၆) ခုတွင်ခဲဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော Solder SMT Reflow O ...
Hot Sell SMT Reflow Soldering Oven6Zone Lea ...
Programmable Reflow Weldin ဖြင့် Digital Display ...
Shenzhen ETON Automation Equipment Co. , LTD ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၀ န်ထမ်းပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးsquareရိယာအကျယ်မှာ ၂၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျော်ကျယ်ဝန်းပြီးအမြန်နှုန်းနှင့်ရွေးချယ်သောစက်၏အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး SMT စက်သည် LED အလင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်လယ်ကွင်းဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းနှင့်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်နာမည်ကောင်းနှင့်ကျော်ကြားသော။
ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးစက်ဖြစ်သည့်အမြန်ဆုံး 150000CPH စက်ဖြင့်အမြန်ဆုံးအလိုအလျောက်ရွေးချယ်နိုင်သောစက်ကို ETON တီထွင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးနည်းပညာမူပိုင်ခွင့်ကိုချီးမြှင့်သည်။ 1M 5M 50M 100M 500M ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော LED ကြိုးအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးစက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျာမနီ၊ အီဂျစ်၊ တူရကီ၊ ဗီယက်နမ်၊
မျက်နှာဖုံးစက်ခေါက်စက်ကိုဝါဂွမ်းခေါက်စက်ဟုလည်းလူသိများသည်။ နာမည်ကအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်းဒါဟာမျက်နှာဖုံးခေါက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ မျက်နှာဖုံးခေါက်စက်တစ်လုံးဆိုတာဘာလဲ။ ဤသည်ကိုပိုမိုရှင်းပြသင့်သည်မဟုတ်။ မျက်နှာဖုံးကိုခေါက်ပြီးထုပ်ထားသင့်ကြောင်းလူသိများသင့်သည်။
၄၄ ။ Bld ။ , 5th ။ Cuigang စက်မှုဇုန်၊ Huaide ရပ်ဝန်း၊ Fuyong၊ Baoan ခရိုင်၊ Shenzhen, China
ဖက်စ်: 0086-755- 29502066